ရေခဲပြင်အသီးကိုသီးပြုတ်ရည်အိုး, Clear ကိုလက်ဖက်ရည်အသီးကိုသီးပြုတ်ရည်အိုး
အသီးပြုတ်ရည်အိုး-Clear ကိုလက်ဖက်ရည်အသီးပြုတ်ရည်အိုး, အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်သံပုရာ, အသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်အဖျော်ယမကာသည်။
♦စမတ်ပြုတ်ရည်အိုးဒီဇိုင်းစတော်ဘယ်ရီ, Raspberry, လိမ္မော်ရောင်, သံပုရာ, ထုံး, သခွားသီး, ဂျင်း, လတ်ဆတ်သောပူစီနံနံ့သာမျိုး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပိုပြီးအရသာဖြစ်နိုင်ခြေအပါအဝင်အကောင်းဆုံးသဘာဝအရသာတာဟာ, ကယ်တင်တတ်၏။
♦ Mint ထံမှဟင်းသီးဟင်းရွက်များ & သီးအပွနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သဘာဝအရသာရေ Create, သံပုရာ, ထုံး, စတော်ဘယ်ရီ, သရက်သီး, လိမ္မော်သီး, Citrus နှင့်ပိုပြီး။
သဘာဝကျကျကြောက်မက်ဘွယ်အရသာပြုတ်ရည်နှင့်အတူရေ။ အဆိုပါပြုတ်ရည်အိုးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့လုပ်ငန်းစဉ်အချို့လတ်ဆတ်တဲ့အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် Add အမြဲတမ်းလက်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖျော်ယမကာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုတ်ရည်ဗော့ဒ်ကာသို့မဟုတ် sangria နှင့်အတူအညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ တဦးတည်းနေရာလေးကိုအိုးထဲမှာ Mocktails နှင့်ကော့တေး,
အသီးပြုတ်ရည်အိုးလှံတံများတွင်အသီးအနှံ, Citrus ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, သို့မဟုတ် savories ပွင့်လင်း slot နှစ်ခုနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ဖြုတ်ဆွန်းလှံတံ contents တွေကိုသဘာဝကျကျအရည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်, အဖုံးသို့လှံတံ screw နှစ်ခု, ကအရပျ၌လုံလုံခြုံခြုံအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါ Clear ကို acrylic အမြင်သွေးဆောင်ဘို့ခွင့်ပြု; အိုးတစ်ဦးကောင်းစွာ-set စားပွဲပေါ်တွင်အကြီးအကြည့်; အစဉ်မပြတ်အသီးအစားထိုးခြင်းမရှိဘဲ refilled နိုင်ပါသည်။
ပလပ်စတစ်, 100% အစားအစာ-တန်း acrylic ပစ္စည်း
တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစ (set ကို) / polybag / အရောင်သေတ္တာ
ယင်းအသီးကိုသီးပြုတ်ရည်ရေအိုး, ဖြုတ်ပြုတ်ရည်ပြွန်, freezable ရေခဲပြွန်ပါဝင်သည်။
ဒီအသီးကိုပြုတ်ရည်အိုးတစ်ခုလွယ်ကူသော-to-ချုပ်ကိုင်လက်ကိုင်ပါရှိပါတယ်။ ပြုတ်ရည် core ကိုရှေးခယျြသငျ့ရဲ့သဘာဝအရသာအချိုရည်အဘို့အသီးအပွနှငျ့ပွညျ့စုံနိုငျသညျ။
အသီးပြုတ်ရည်အိုးလှံတံများတွင်အသီးအနှံ, Citrus ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, သို့မဟုတ် savories ပွင့်လင်း slot နှစ်ခုနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ဖြုတ်ဆွန်းလှံတံ contents တွေကိုသဘာဝကျကျအရည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်, လှံတံကိုအဖုံးသို့ screw နှစ်ခု, ဒါကြောင့်အားရှင်းလင်းရန် acrylic ဖြားယောင်းအမြင်ဘို့ခွင့်ပြုရာအရပျထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံရှိနေမည်။
ရေခဲပြင် core ကိုပြုတ်ရည်ပြွန်နှင့်ရေခဲ core ကိုဖြုတ်များမှာ cool.Both အချိုရည်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံး drinks.Good လမ်းအအေးများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစာ, detox သို့မဟုတ်ရေသောက်မိသားစုအားပေးရန်အတွက်စံပြ။
ဒါ့အပြင်ကော့တေးသို့မဟုတ် mocktails အောင်များအတွက်စံပြ, ဒါမှမဟုတ် pimms နှင့်သစ်သီးနှင့်အတူကဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ရေငတ်-quencher အမှန်တကယ်နွေရာသီတက်ဝတ်ပြုကြလော့။
ရုံကရိုးရှင်းရဲ့ ... ဆွန်းလှံတံကိုရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးအသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် add ဖုံးဖို့လှံတံကိုဝက်အူ, ရေသို့မဟုတ်ရေခဲထည့်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အစေခံ!
ရုံဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပြုတ်ရည်လှံတံသို့ရေခဲထားပါနှင့်အိုးထဲသို့ဆင်းလျှော။ အသီးအပွသဘာဝကျကျရောမွှေဖို့ခွင့်ပြုသည့်အိုးကိုဖွင့်, သငျသညျရေသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့အသီးသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်အခြားအဖျော်ယမကာလောင်းနိုင်။ ဤသည်ပြုတ်ရည်အိုးသံပုရာရေလုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Raspberry လက်ဖက်ရည်နှင့်အခြားအဖျော်ယမကာ iced ။
အဆိုပါပလပ်စတစ်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့သည်နှင့်ပုံသဏ္ဍာန်အကြီးအကြည့်ပါတယ်။ ဒါဟာငါသွန်းလောင်းရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အကြီးဖွင့်ကြောင်းအမှန်အတိုင်းလက်ခံတှငျငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက်တစ်ဦး tad သေးငယ်ခဲ့ပေမယ့်။ ငါပြုတ်ရည်ကိုရေအတှကျအခြို့သောအသစ်သောချက်ပြုတ်နည်းများကြိုးစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်!
ဒါကအခုငါ့အမီးဖိုချောင်၌ငါ၏တဲ့လူသုံးအများဆုံးထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ကိုယ့်ပထမဦးဆုံးဒီရောက်တဲ့အခါကိုယ့်အချို့သောသခွားသီးနှင့်စတော်ဘယ်ရီဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်ကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်၏။ အဆိုပါပလပ်စတစ်အထူသည်နှင့်အကြီးအအရည်အသွေးဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကျွန်မအံ့သြစရာ combinations.Working ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်အတူတက်လာမယ့်သိပ်ပျော်စရာရှိခြင်းဖြစ်၏။ တကယ်ကောင်းသောအသီးအရသာရေစေသည်။
လှပသောရေအသီးပြုတ်ရည်အိုး! ငါအသီးထုံမွှန်းရေလုပ်ကြီးမားတဲ့အလုံအလောက်အိုးရှိကွောငျးကိုချစ်။ ငါယခုတိုင်အောင် water- ့ရေပုလင်းထက်ပိုမကိုင်ခဲ့ဘူးငါကြိုက်တယ်တမတှေ့နိုငျတယျ။ ငါရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားခဲ့နိုင်သည်နှင့်လေးတွေတနေ့လုံးအဲဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကူညီနိုင်သည်ကိုချစ်ကြတယ်။ sugary ဖျော်ရည်နှင့်အဆိုဒါတွေရန်၎င်း၏တစ်ဦးအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာ။ ထို့အပြင်ဆေးကြောသန့်စင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
ဤအရာသည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကလက်ခံရရှိချိန် မှစ. နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လုံးဝကြောင့်ကိုချစ်ပါတယ်!
အသီးပြုတ်ရည်အိုး-Clear ကိုလက်ဖက်ရည်အသီးပြုတ်ရည်အိုး, အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်သံပုရာ, အသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်အဖျော်ယမကာသည် .......